Nlekọta nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Swiss-apteka.com na-eme ka nkwenye zuru ezu nke ozi natara site na ndị ọrụ edebara aha. Ndokwa nile nke iwu nchebe ma na-arụ ọrụ na ndị ahịa dabeere na ụkpụrụ iwu na omume nke Russia.
Ozi niile ị nyere n'oge ndebanye aha ga-echekwa na nchekwa data nchekwa. Ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Swiss-apteka.com na-emesi nzuzo zuru ezu mgbe ọ na-eme usoro a, nakwa na a ga-eji ozi gbasara onye zụrụ ya nanị maka mkpochapụ nke natara.
Nanị ndebanye aha gị chọrọ ka ndị ọrụ anyị nwee ike ịkpọtụrụ gị site na ekwentị, ọrụ nnyefe ahụ wee nwee ike ịnye ihe ndị a nyere iwu ka ha gaa ebe kwesịrị ekwesị na oge.
Na mgbakwunye, site na ịdenye aha, ị nwere ike ịnweta ozi banyere ozi niile nke ụlọ ahịa anyị: ngwaahịa ọhụrụ ngwaahịa, ahịa, mmemme pụrụ iche.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ banyere ikike na ndebanye aha na ụlọ ahịa - dee anyị na adreesị email info@swiss-apteka.com na anyị ga-enyere gị aka mgbe niile!
Ndị nnọchiteanya nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Swiss-apteka.com agaghị ajụ gị maka nkọwa kọntaktị kaadị plastic ma ọ bụ nkọwa nzuzo ndị ọzọ.
1. Ụfọdụ ihe etinyebere na saịtị ahụ bụ ikike ọgụgụ isi nke ụlọ ahịa dị na ntanetị Switzerland-apteka.com. A machibidoro ihe ndị dị otú ahụ na-enweghị nkwenye nke ndị nwe ụlọ.
2. Ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Swiss-apteka.com nwere njikọ nke na-ekwe ka ị gaa na saịtị ndị ọzọ. Anyị enweghị ọrụ maka ozi a bipụtara na saịtị ndị a, anyị na-enyekwa ha njikọ naanị iji mee ka ndị ọbịa gaa na saịtị gị dị mma.
Ozi nkeonwe na nchekwa:
1. Ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Swiss-apteka.com na-emesi obi ike na ọ nweghị ozi ọ bụla ị nwetara ga-enye ma ọ bụrụ na ọ bụla ọnọdụ ọ bụla nye ndị ọzọ, maọbụrụ na achọrọ iwu dị mma nke Russian Federation.
2. N'ọnọdụ ụfọdụ, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Swiss-apteka.com nwere ike ịjụ gị ịdebanye aha ma nye ozi nkeonwe. A na-eji ozi a na-enye naanị mgbe ị na-edozi iwu na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ iji nye onye ọbịa ohere ịnweta ozi a kapịrị ọnụ.
3. Enwere ike ịgbanwe, emelite ma ọ bụ ehichapụ oge ọ bụla na ngalaba "Personal".
4. Iji nye gị ozi nke ụdị ụfọdụ, ụlọ ahịa na-echekwa na Switzerland-apteka.com, na nkwenye gị, nwere ike izipu ozi ozi na adreesị ozi-e akọwapụtara na ndebanye aha. Ị nwere ike wepu aha gị n'oge ọ bụla.
5. Ihe ọmụma na weebụsaịtị a bụ ihe ọmụma zuru oke, ọ pụkwara ime mgbanwe ọ bụla na-enweghị ọkwa ọbụla.
Maka ajụjụ niile gbasara ịkwado ụkpụrụ nchekwa, nwebisiinka na ikpe ndị ọzọ - biko kpọtụrụ nchịkwa saịtị na info@swiss-apteka.com